Aya ndiwo mapassword anonyanya kushandiswa muna 2019 uye 1234 anoenderera mberi pamusoro pezita | Linux Vakapindwa muropa
Aya ndiwo mapassword anonyanya kushandiswa muna 2019 uye 1234 anoenderera mberi pamusoro pechinyorwa
Isu tangori nemazuva mashoma kubva kupera kwegore uye ongororo uye nhamba imwe yeanonyanya kushandiswa mugore ivo vari kutanga kuzivikanwa uye chimwe chazvo hachirege kufuratirwa, nekuti mapassword anonyanya kushandiswa mukati megore rino ra2019 anotisiira isu tine hanya.
Kubva kunyangwe mazhinji emipiro kubva kumabhurawuza makuru ewebhu, pamwe nekushandisa kwewebhu, mawebhusaiti pakati pevamwe kwavanokurudzira zvakanyanya kushandiswa kwepassword dzakasimba uye mune web browser ivo vanowanzotipa isu password jenareta, zvinoita sekunge kuedza uku havana kubereka michero yakawanda.
Rondedzero yemaphasiwedi inonyanya kushandiswa mu2019 mubatanidzwa nevanoongorora vakazvimiriraKana isu tikawedzera mimwe mishumo mhedzisiro yacho haizo shanduke zvakanyanya
Nekuti kunyangwe kutyorwa kwedatha kunosanganisira kubiwa kana kubiwa mapassword achigadzira misoro, vazhinji vashandisi veInternet vachiri kuita zvisarudzo zvisina kunaka zvine chekuita nezvekupinda kwavo.
Uye ndiyo iyo password password NordPass yakagovana runyorwa rwe 200 mapassword yakanyanya kushandiswa mu2019 uye yakaratidza iyo yausingatombofanirwe kushandisa:
"Vanoongorora vakazvimirira, avo vakakumbira kuramba vasingazivikanwe, vakanyora ndokugovana nesu runyorwa rwemapassword mazana maviri ane mukurumbira akaburitswa panguva yekutyorwa kwedata gore rino. Iyo dhatabhesi inoyevedza: mazana emamiriyoni mapassword muzere. "Uye kana iwe uchifunga kuti kune akawanda mapassword akabuda, isu tine nhau dzakaipa kwauri - ichi chingori chirevo chechando."
Iwo mapassword anozivikanwa ane zvese zviri pachena nhamba yemubatanidzwa uye zviri nyore kufungidzira (12345,111111,123321), mazita echikadzi anozivikanwa (Nicole, Jessica, Hannah) uye tambo chete dzetsamba dzinoumba mutsetse wakakombama kana wepamusoro kuburikidza neQWERTY keyboard (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx, nezvimwe.
Zvinoshamisa, zviri pachena ("Pasiwedhi" kana "password") zvichiri kufarirwa kwazvo Zvakanaka, vakatenderedza vanhu mazana masere nemakumi matatu nemakumi matatu vachiri kushandisa.
Kuedza kutsvaga chikonzero izvo zvinogona kuratidza kuti nei izvi zvisina kuchinja (kunyanya, nei vashandisi veInternet vachiramba vachishandisa "password", "password" sepassword pakati pevamwe, pamwe nevamwe vanoonekwa mune runyorwa gore rimwe nerimwe).
Chikonzero chekutanga ndeyekuti ivo vari nyore kurangarira. Izvo zviri nyore: Vanhu vazhinji vanosarudza kushandisa mapassword asina kusimba pane kuneta nekuyedza kurangarira mazwi akareba, akaomarara.
Nehurombo, izvi zvakare zvinoreva kuti vanoshandisa chinhu chimwe chete kumaaccount avo ese. Uye kana imwe yadzo ikawanikwa iri kutyora, mamwe maakaunzi ese anongoerekana akanganiswa zvakare.
Kune rumwe rutivi, zvakare vashandisi vazhinji vanopokana kuti havana chinhu chakakosha kana chimwe chekuvanza saka ichi chimwe chikonzero nei vasinganetseke kuseta yakanaka password. Kunyangwe chirevo ichi chichifamba mushe, haukoshese icho chauinacho kusvikira uchiona chakarasika.
NordPass inokurudzira kutora matanho ekuchengetedza zviri nani maakaunzi ako nguva isati yakwana.
Kubva pakupera kwezuva, iyo yakapusa email yako password inowira mumaoko evamwe inogona kukuvadza zvakanyanya nekuti urikunyatso kusiya musuwo wakavhurika kuti vatore maakaundi ako, semuenzaniso masocial network, mawebhusaiti kana zvakatoipisisa kuwana maakaundi ako ebhangi.
Kunyange zvakadaro Nhasi mazhinji mawebhusaiti atove nerutsigiro rwezvinhu zviviri-chokwadi, Vazhinji vashandisi havawanzo kushandisa rudzi urwu rwechengetedzo kana kunyanyisa kana vachirishandisa, pachinzvimbo chekushandisa basa racho kutumira kodhi yekusimbisa kunhamba yako yefoni kana imwe nzira, vanowanzo kukumbira kuti itumirwe kune yavo imwechete email.
Finalmente dambudziko rekushandisa mapassword senge "1234" harisi dambudziko chete mu network asi iri zvakare rimwe remaphasiwedi anonyanya kushandiswa sekiyi yekubhengi.
Pasina imwezve ado, iwe unogona kutarisa runyorwa rweanonyanya kushandiswa mapassword mune ino 2019 Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Aya ndiwo mapassword anonyanya kushandiswa muna 2019 uye 1234 anoenderera mberi pamusoro pechinyorwa
Iyo Yemahara Software Foundation Chipo Chinyorwa
Ubuntu Server 20.04 inogona kusvika ine yekuvandudza uye nekukurumidza mugadziri